Wai Zin6From Soundcloud - AllMp3Gets.com
Wai Zin 6
1. နှုတ်မဆက်နဲ့ ငိုချင်တယ် လားရှိုးသိန်းအောင်
By Wai Zin 2
Please, do not say goodbye!!! I would like to cry!
2. ဟိန်းဇော်၊ Rဇာနည် - ပလက်ဖောင်းမင်းသား
By Zin Wai Latt
3. A htii kyan thingyin
By Wai Zin 6
4. ဖြေးဖြေးလေးနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်လေး - ပလေးဘွိုင်းသန်းနိုင်
တစ်ခါတစ်ခါကျရင်ဗျာ ... ဟို စိတ်အရူးထချင်တယ် ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ခါကျရင် နေ့တိုင်း ဒါ ဒီလိုလုပ်တယ် စားတယ်၊ သောက်တယ်၊ သွားတယ် အလုပ်လုပ်တယ် လာတယ် ... တစ်ခါတစ်ခါကျရင် ဟို ခပ်ပေါက်ချင်သလိုလို ဘာလိုလို .. ပေါက်တယ်ဆိုတာ ဆေးတွေဘာတွေ မချပဲနဲ့ ဒါဒီအတိုင်းဖြစ်တာ ... တစ်ခါတစ်ခါကျရင် သေချင်တယ်ဗျ ... သေချင်တဲ့အခါကျရင် 'ငါသေရင် ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲ ??? ငါ့ကို နတ်ပြည်ကများ ဘယ်လိုများလာခေါ်မလဲ ဘာလဲ ညာလဲ ???' .... အဲဒါကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီးတော့ ငါသေကြည့်လိုက်ချင်တယ် ။ တကယ်သေလို့မရတော့ သီချင်းနဲ့သေကြည့်တယ် ။ အဲ့ဒီတော့ ကိုလေးလွင်ကို ... 'ကဲ ကိုလေးလွင်ရေ ... ကျွန်တော်သေချင်တယ်ဗျာ ... အဲဒီအကြောင်းလေးကို ကျွန်တော်သေသွားရင် ဘယ်လိုများဖြစ်မလဲ ရေးစမ်းပါ' ... အဲဒီမှာ ကိုလေးလွင်က ရေးပေးတယ် "ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်လေး" တဲ့ ... အာ့ .. အရမ်းမိုက်တယ် !! ဒီနေ့ထက်ထိ ကျွန်တော်ကြိုက်တုန်းပဲ .... ။ (ပလေးဘွိုင်းသန်းနိုင်)
5. တနင်္ဂနွေနေ့ မင်္ဂလာဆောင်မယ် - ဇော်ဝင်းထွဋ်
တနင်္ဂနွေနေ့ မင်္ဂလာဆောင်မယ် ==================== ♣ တိမ်ပြာပြာနေ့တစ်နေ့ ဆန်းဒေးမှာကွယ် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကလေး ကျင်းပနေတယ် ပျော်ရွှင်စရာလေးပေါ့ ချစ်တဲ့သူရယ် သူများကို အားကျမိတယ် အချစ်ကလေးရယ် ဘယ်လိုလဲပြော သူများကို အားကျမိတယ် အချစ်ကလေးရယ် ဘယ်လိုလဲပြော ♣ ရာသီတွေအမြဲတမ်း ပြောင်းလဲနေတယ် ကြင်နာသူ အသည်းလေး မစိမ်းနဲ့နော်ကွယ် မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကလေး ကျင်းပချင်ပါတယ် သူများလို လက်ထပ်ကြမယ် အချစ်ကလေးရယ် ဘယ်လိုလဲပြော သူများလို လက်ထပ်ကြမယ် အချစ်ကလေးရယ် ဘယ်လိုလဲပြော အမြဲတမ်း ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း မခွဲတမ်းဘဲ အမြဲတမ်း ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း မခွဲတမ်းဘဲ အမြဲတမ်း ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း မခွဲတမ်းဘဲ အမြဲတမ်း ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း မခွဲတမ်းဘဲ Lyrics - သုခမိန်လှိုင် Vocal - ဇော်ဝင်းထွဋ် All Accoustic Guitar - ကျင်ခန်းဖုန်း Harmonica Shaker & Tamborine - ဇော်ဝင်းထွဋ် Studio - Emperor Work Station မင်းမင်းလတ်အမှတ်တရ တေးစီးရီး T Music Production
6. ပလက်ဖောင်းမင်းသား (E.M.G အဖွဲ့)
============= ပလက်ဖောင်းမင်းသား ============= • ကြယ်ရောင်တွေ ပျောက်တဲ့ညမှာ အပြင်လောကထဲ ထွက်လာသူ အဆူအပူခံကာ မှီခိုရာဌာန အိမ်ဆိုပေမယ့် အိမ်လို မမည်တော့ဘူး ... • မာကျူရီမီးလုံးအောက်မှာ ကိုယ့်အိတ်ထဲ လက်နှိုက်ရှာကြည့် ငွေရယ်ဆိုလို့ ဆယ်တန်နဲ့အကြွေတစ်ချို့ ရင်ခွင်မှာတော့ မျှော်လင့်ချက်ကြီးတစ်ခု ... •• မျက်ရည်ကျပြီး လိုက်ခေါ်သူရယ် မရှိ သေလိုက သေနိုင်၏ ၊ ရှင်လိုက ရှင်နိုင်၏ •• ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ရပ်ကာနေနိုင်မှ ပြန်လာမယ် ပြန်ခဲ့မယ် ယောကျာ်းမို့ ကိုယ်သူဋ္ဌေးဖြစ် ခွေးဖြစ်ပါပဲ . . . • ဒီလိုနဲ့ ရက်ပေါင်းများစွာ ငတ်ခြင်းနဲ့ ပြေးတမ်းလိုက်တမ်း လူဆိုတာ တော်ရုံနဲ့သေခဲ ကြာလာတော့လည်း ခံနိုင်ရည်နဲ့ဝ ... • အပျံသင်စ တဖြစ်လဲတဲ့အခါ ကိုယ် ပလက်ဖောင်းမင်းသား အရင့်စား ရေဆိုတာ နွေခါမှာ ခက်သေး ငွေဆိုတာ ရှာနိုင်သူအတွက် မရှား ... •• လုပ်စရာ ရှိတာ ပြီးအောင် မြန်မြန်လုပ် သိပ်မတွေးနဲ့ သိပ်မငေးနဲ့ ၊ အချိန်ကုန်တယ် လေကုန်တယ် •• အရလွယ်တိုင်းလည်း တွေ့တာ အကုန်မယူနဲ့ အန္တရာယ်ဟာ လက်တစ်ကမ်းမှာ ကြာကြာဝါးမယ့်သွား ၊ ဘာစားစား အရိုးကြည့်ရှောင်ဟေ့ ... • ဖော်မစုံသူ သောက်တဲ့အလင်းဆိုင် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ခုခေတ်ပေါ်သီချင်း ဖီလင်ဆိုတာ ဒီဟာကို ခေါ်သလား ဘာရယ် ညာရယ် ကိုယ်လေမသိပဲ ဆွေး ... • အချိန်တန်သော် ဘ၀ပေးကုသိုလ် ကိုယ်လည်းပဲ အတွဲလေးနဲ့မိ မဒ္ဒီကိန္နရီ စံချိန်မမီပေမယ့် ဟာနေတာကို မဟာရုံ သူဖြည့်ပေး ... •• ရွေးနေရအောင် မင်းက ဘာကောင်လည်း အကောင်းဆုံးက အကောင်းဆုံးပေါ့ တန်ရာက တန်ရာပေါ့ •• ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး ရူးချင်တယ်ဆိုလည်း ကပ်လက်စနဲ့ ကပ်ဦးပေါ့ ထရံထက်မှာ ရွှေမင်းသမီး ဇာတ်ကားကြော်ငြာ ... • လူဆိုတာ အကျင့်ရဲ့ကျေးကျွန် ထီထိုးရင်း တိုက်ဖို့မေ့ရင်း ဒီအခြေအနေကို ပျော်တယ်လို့ မယူဆရင် ပျော်တယ်ဆိုတာ ဘာလဲ ကိုယ်မသိတော့ ... • နာမည်ကျော် ငွေရှိတဲ့ဘ၀ဟာ အိပ်မက်နဲ့ပဲ ကျိန်းကြေတတ် ဒီအရွယ်မှာမှ ကိုယ်ဘာကောင်လည်း မသိရင် ကိုယ်ထင်တာထက် ကိုယ်ဟာ ပိုအ,ပေါ့ ... •• ကြိုက်တာရမယ် သူ့တန်ရာတန်ကြေး Brother ရေ .. ဇေပါတယ် ၊ ငွေသာအရင် မ,စပါ •• ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ရပ်ကာနေနိုင်ရွေ့ လျှောက်ဦးဟေ့ ... လျှောက်ဦးဟေ့ ... နောက်ဆုံးတစ်နေ့ ကိုယ်ပလက်ဖောင်း မင်းသားအရင့်စား ... တေးရေး - စိုင်းခမ်းလိတ် တေးဆို - စိုင်းထီးဆိုင်၊ တူးတူး၊ ချစ်ကောင်း၊ ဇော်ဝင်းထွဋ်၊ ဟယ်ရီလင်း၊ ရင်ဂို၊ စည်သူလွင်၊ အဲလက်စ် တေးစီးရီး - အကောင်းဆုံးများ၏ အမှတ်တရများ တေးဂီတ - EMPEROR, E.M.G
7. မြနန္ဒာ တေးစာဆို - နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်၊ တေးသီဆို - မာမာအေး
8. IMP - Myat Nar
Your Face!!! I would like to see your face at all if possible!!! :)
9. Myanmar New Song အချစ်ဦးမဟုတ်ပေမဲ့ J Mine Myi
မင်းဟာ အချစ်ဦးမဟုတ်ပေမဲ့ ... ငါရဲ့ဘ၀မှအချစ်ဆုံးပါ ... မျှော်လင့်ထားတဲ့ အနာဂတ်နေ့ရက်အတွက် ကြားစကားတွေကို မင်းမယုံနဲ့ ....
10. D Lay~~~ ငိုကြွေးသောညများ
I never forget it !!!
11. Number One ( Oasix )
By Mr-Wai Zin Phyo
12. ငါညာခဲ့တယ်ပေါ့. ဒါပေမယ့်
ငါညာခဲ့တယ်ပေါ့ .. ဒါပေမယ့် ...
13. Myan Myan Nann Par Pan Kalay - Nge Nge and Rebecca Win
Kiss me Quick (the name of the flower) !!! :) You never know that I love you!
14. ခဏတာ - G Latt (KHA NA TAR)
This is my favorite song! I can't be boring to listen to this song even though I have listened to it for several times.
15. Yuzana - Nge Nge Tone Ka Htet Po Chit Tal
I love you more than before :)
By Wai Zin Shine
17. Sar Nar Tat Thu Moh (cover)
By Wai Wai Zin
18. General Aung San's Song (cover)
19. မီမီဝင်းဖေ - သီချင်းမရှိတဲ့ဂစ်တာ.mp3
20. TU (Kse) 1
By Wai Zin Htet 2
Dirty Audio X Rickyxsan Gettin 39 That Jack Edit Bass Boosted
Brandy Joe Brick Street
Electronic Dance Music Uk
S K Band
Devie Cruz Inoue
Dj Jalil Man
موسيقى رقصه البطريق
Rdek Adam Off��cal
It S Homemade
Electro News Records
Alex Ortiz 73
Felipe Jos Dias
Nothing But Thieves Fans
Electro Dance Karma